Namuhla iWorld Wetlands Day kanti ibungazwa ngesomiso | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla usuku lweWetlands Day. Kodwa-ke, amaxhaphozi emhlabeni jikelele namuhla abungaza usuku lwawo oluthintwe yisomiso esibi esibeka engcupheni ngaphezu kwengxenye yaso, hhayi kuphela ngenxa yokuntuleka kwamanzi, kodwa ngenxa yezinsongo zawo eziningi.
Ngabe uyafuna ukwazi isimo samanje samaxhaphozi ngosuku olufana nanamuhla?
1 Isomiso emaxhaphozini
2 Usuku lwe-Gloomy lokugubha
3 Umthelela emaxhaphozini
Ukuhlukahluka kwe-hydric yamaxhaphozi kuyisici esiyinhloko sokufanayo eSpain, ngoba imvula ayizinzile kakhulu. Singathola izinyanga ezomile nezinye zivula kakhulu. Amaxhaphozi Zivumelana nezimo zokushisa nezimvula ezinikezwa yisimo sezulu.
Lokhu kwenzeka ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, kepha ngemuva kwezinyanga zokugcina zesomiso esibi ezweni, kube nomthelela ekuwohlokeni kwesimo samaxhaphozi amaningi aseSpain futhi izici zawo ezihlukile ziyathinteka futhi zisengozini.
Amaxhaphozi angaphakathi nezwe afana nawo ichweba laseFuente de Piedra (Malaga), i-Albufera yaseValencia noma ichibi i-El Hondo (Alicante), noma ezinhlelweni ezinkulu zamachibi, njengeTablas de Daimiel (Ciudad Real) zisengozini kakhulu ezimweni lapho imvula incane khona.
Njengoba isomiso esibi siqhubeka nokukhuphuka kwamazinga okushisa, kunokwesaba ukuthi amaxhaphozi azokoma bese iSpain izoqala iphenduke ihlane. Ukugwema lokhu, uHulumeni kumele ahambisane nezidingo ezisungulwe ku-Water Framework Directive, ezibeka ngokusobala nangokufishane ukuthi amanzi alomthombo obalulekile kufanele aphathwe kanjani.
URoberto González, inhloko yohlelo lwaManzi lwale nhlangano, uchaze ukuthi ukuhlela okwenziwe eSpain ngokusetshenziswa kwamanzi ayibheki isomiso njengesakhiwoEsikhundleni salokho, lapho kuba nenkathi eyomile, kwenziwa "izinyathelo ezihlukile".
Ngakho-ke, isomiso samanje sithinta lezi zinhlelo zemvelo ngengcindezi ethe xaxa, phambilini eyathinteka ekusetshenzisweni ngokweqile kwama-aquifers, ukungcoliswa kwamanzi angaphezulu nangaphansi komhlaba noma umbuso ophansi wokugeleza kwemvelo.
Usuku lwe-Gloomy lokugubha
Kusukela ngo-1977, konke ngoFebhuwari 2, kugujwa uSuku Lwamaxhaphozi Lomhlaba Ukukhumbula ukusayinwa kweRamsar (Iran) kweSivumelwano Sezindawo Ezimanzi, kulo nyaka kugxilwe kakhulu ezindaweni zemvelo ezisemadolobheni.
Ukuze amaxhaphozi amaningi asebenze ngendlela ejwayelekile futhi engokwemvelo, kwanele ukuvumela amanzi ageleze futhi abuyele emzileni wawo wemvelo. Izinsiza ezingaphezulu kufanele ziyeke ukuxhashazwa ukuze amaxhaphozi abuye akwazi ukusebenza kokugeleza kwemvelo futhi abuyise isimo sawo esihle.
Ama-ecosystems afana nama-peatlands, amaxhaphozi, amaxhaphozi, amachibi, ama-deltas, amagagasi aphansi, izindawo zasolwandle ezisogwini, ama-mangrove, ama-coral reefs, iziphethu, amadlelo erayisi, amadamu noma amafulethi kasawoti nawo ayizindawo ezingamaxhaphozi, ezicebile ngezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo, ezibalulekile njengabalawuli besimo sezulu kanye ekunikezelweni kwamanzi ahlanzekile, abalulekile ekusindeni komuntu.
Kodwa-ke, ihlala ingcoliswa, isetshenziswa ngokweqile, futhi ithinteka yizenzo zabantu. Ama-60% amaxhaphozi aseSpain anyamalele kanti lawo asele asesimweni esibi. Ngalesi sizathu, kuyesatshwa ukuthi iSpain ingajika ibe yihlane ngokuhamba kwesikhathi, uma isimo siqhubeka kanjena.
Kuzo zonke lezi zizathu, kubalulekile ukuthi ohulumeni bafake izindlela zokuvikela ukugeleza kwemvelo nokulawulwa okukhulu kokukhishwa kwamanzi ezinhlelweni zesomiso ukunciphisa imiphumela yabo nokugwema ukusetshenziswa ngokweqile.
Ukusatshalaliswa okukhulu kolwazi ngokubaluleka kwamaxhaphozi, kuyo yonke le mpelasonto, izindawo ezingamaxhaphozi eziningi zizokwenza imisebenzi yazo zonke izethameli ukuqwashisa umphakathi ngesidingo sokuzigcina. Izindawo ezingamaxhaphozi ezizoba nemisebenzi yosuku lweWorld Wetlands Day yilezi IDoñana, iTablas de Daimiel, i-Ebro Delta, i-Villafáfila lagoons noma i-Albufera yaseValencia
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Namuhla iWorld Wetlands Day kanti ibungazwa ngesomiso